Sajhasabal.com | Homeगोरखा २ मा बाबुराम कि नारायणकाजी ? यस्तो छ लेखाजोखा
गोरखा २ मा बाबुराम कि नारायणकाजी ? यस्तो छ लेखाजोखा
कात्तिक २७, गोरखा । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएसँगै गोरखा २ मा पूर्वसहयात्री डा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले पछिल्ला दिन मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न घरदैलो र चुनावीसभालाई आक्रमकरुपमा अघि बढाइरहनु भएको छ ।
डा भट्टराई र श्रेष्ठका भाषण सुन्दा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने ढंगका आरोप–प्रत्यारोप गरिएको सुनिन्छ । जनताले डा भट्टराई र श्रेष्ठ दुवै जिल्ला र देशलाई आवश्यक पर्ने नेता भएको प्रतिक्रिया दिए पनि नेताहरु एकअर्काविरुद्ध खनिएका छन् ।
जनताले कसलाई विकासवादी र भोलि पनि चाहिने नेता बनाउँछन् त्यो हेर्न महिना दिन धैर्य गर्नुपर्नेछ । डा भट्टराई र श्रेष्ठ दुई विपरीत धु्रवको प्रतिनिधित्व गर्दै चुनावी तालमेलमा रमाउनुभएको छ ।
देशका दुई वटा शक्ति नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले क्रमशः समाजवाद र साम्यवादको धार लिएको देखिन्छ । आखिरमा देशमा दुई शक्तिको दबदबा रहेको यसपटकको गठबन्धनले देखाएको छ ।
काँग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेको लोकतान्त्रिक धु्रवमा राप्रपालगायतका दल चुनावी गठबन्धनमा छन् भने एमालेले प्रतिनिधित्व गरेको धु्रवमा नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका शक्ति अटाएका छन् ।
चुनावका हरेक सभामा एउटा पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेको दृश्य रोचक देखिन्छ । कोही त कार्यक्रम गरेपिच्छे पार्टी परिवर्तन गर्छन्, शीर्ष नेताको हातबाट अबीर लगाउँछन् । प्रायः स्वार्थी चुनावपिच्छे पार्टी परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् ।
डा भट्टराई र श्रेष्ठको प्रायः सबैजसो कार्यक्रममा एक/दुई जना पार्टी प्रवेश गरिरहेकै हुन्छन् । कहिले नयाँ शक्ति छाडेर माओवादीमा, कहिले माओवादी छाडेर नयाँ शक्तिमा त कहिले काँग्रेस छाडेर एमाले, एमाले छाडेर काँग्रेस ।
डा भट्टराईले ‘श्रेष्ठ माओवादी नै होइनन्’ सम्म भन्नुभएको छ भने श्रेष्ठले समृद्धिको नारा दिने नयाँ शक्तिका संयोजक डा भट्टराई ‘सिन्को पनि भाँच्दैनन्’ भनिसक्नुभएको छ । आरोप–प्रत्यारोप कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने अन्दाज यहीँबाट लगाउन सकिन्छ ।
दुवै नेताले जनतासँग भोट माग्न अनेक उपाय लगाएका छन् । जितका लागि भट्टराईलाई काँग्रेसका कार्यकर्ता इमान्दार हुनुपर्नेछ भने श्रेष्ठका लागि एमालेका कार्यकर्ताको भर ।
मतदाता फकाउन डा भट्टराईले भविष्यमा काँग्रेससँग एकता पनि हुनसक्ने बताइसक्नुभएको छ । यस्तै, श्रेष्ठले झुक्किएर बाबुरामजीले जित्नुभयो भने पनि स्वतन्त्र सांसद मात्रै हुने हो, संसद्मा हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् भन्ने कुरा मतदातासामु राखिसक्नुभएको छ । भट्टराई वा श्रेष्ठमध्ये कसले चुनाव जित्छन् भन्ने उत्सुकता जिल्लाभित्र र बाहिर पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ । प्रशन्न पोखरेल/रासस